जुन दिन तपाईंले आफ्नो विवेक हराउनुभयो: यो के हो, कसले लेख्यो र किन यसलाई पढ्यो वर्तमान साहित्य
स्रोत: पेन्गुइन चिली
पुस्तकको सुरूवातमा, त्यहाँ केहि छन् जुन विषयवस्तुको कारणले गर्दा, यस क्षण वा ईतिहासको, विजय हुन्छ र धेरै टाढा जान्छ। त्यो त्यो दिन हो जुन स्यानिटी हराएको थियो, एक षड्यन्त्र, जहाँ सुरुमा तपाईंलाई वास्तवमा कहाँ लिने भनेर थाहा छैन, पछि यसले तपाईंलाई यस्तो किसिमले चलाउँछ कि तपाईं के चाहानुहुन्छ भन्ने कुराको अन्तसम्म पुग्न हो। यो भएको छ।
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने विवेक हराएको दिन को बारे मा कुरा जान्न, जस्तै कसले यो लेख्यो, यसको बारेमा के हो, यसको पात्रहरू के हुन् वा यदि पुस्तक यसको लायक छ भने हामी तपाईंलाई तपाईंको लागि तयार गरेका पढ्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 दिन को लेखक हो कि विवेक हरायो
2 कुन दिन उसले आफ्नो दिमाग हरायो?
2.1 दिन सेन्टी चरित्रहरु हराएको थियो
3 के यो किताब पढ्न लायक छ?
4 होशियार रहनुहोस्: त्यहाँ दोस्रो भाग छ
दिन को लेखक हो कि विवेक हरायो
त्यो दिन "अपराधी" उसले आफ्नो विवेक हरायो अरु कुनै होईन जेभियर कास्टिलो। मिजासका यस स्पेनिश लेखकले २०१ 2014 मा आफ्नो पहिलो उपन्यास प्रकाशित गरे। वास्तवमा, उनले यसलाई स्वयं प्रकाशित गरे। तथापि, प्रकाशकहरूले उनलाई याद गरिन् जब उनी सफल हुन लागे, धेरैले यसलाई प्रकाशित गर्ने प्रस्ताव राखे। अन्तमा, उनले सुमा डे लेट्रासको लागि रोजे र यो २०१ 2016 मा फेरि प्रकाशित भयो।
अन्य लेखकहरू जस्तो नभई, जसले लेखनको लागि जोशलाई लिएर यसका लागि अध्ययन गरेका छन्, जेभियर कास्टिल्लो एक वित्तीय सल्लाहकार थिए। यो खाली समय थियो कि उनले आफ्नो रचनात्मकता प्रकट गरे र त्यो पहिलो उपन्यास अगाडि ल्याए। र त्यस पछि यो रोकिएन किनकि यसको बजारमा nove उपन्यासहरू छन्, तीमध्ये अन्तिम २०२१ देखि द सोल गेम हो।
कुन दिन उसले आफ्नो दिमाग हरायो?
रहस्यको केहि पनि प्रकट नगरी, विवेक हराएको दिनको कथा यो एक हत्या र एक पक्राऊ को साथ शुरू हुन्छ। याकूब ना naked्गो देखिन्छ र एउटी महिलाको कुहिएको टाउको वहन गर्दै। स्पष्ट रूपमा, पुलिसले उनलाई समातेर यो महिला को हो भनेर पत्ता लगाउने प्रयास गर्‍यो, किन उनले उनको हत्या गरे, शरीर कहाँ छ, इत्यादि।
यो गर्न, तिनीहरूले FBI विशेषज्ञ स्टेलालाई उनीबाट बाहिर जानको लागि पठाउँछन्। तर याकूबले उसलाई केहि पुरानो कथा भन्ने निर्णय गरे, के भयो भन्नेलाई अर्थ दिन ... र त्यहाँबाट कथा एउटा रहस्य, रहस्य र पागलपन हुन थाल्छ।
दिन सेन्टी चरित्रहरु हराएको थियो
यो स्पष्ट पार्न तपाईले चरित्रहरूको जुन परिप्रेक्ष्यमा तपाईले भेट्न लाग्नु भएको थियो जुन स्यानिटी हराएको थियो, यहाँ हामी तिनीहरुलाई सूचीबद्ध गर्दछौं।
याकूब ऊ तपाईलाई भेटेको पहिलो चरित्र हो र तपाई निश्चित हुनुहुन्न कि ऊ पागल हो कि, ऊ होशियार छ वा के हुन्छ उसलाई।
डा। जेन्किन्स। यो चरित्र सुरुमा तपाईं माध्यमिकको रूपमा देख्नुहुन्छ, तर वास्तविकतामा उहाँ कथाको लागि महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँ मनोरोग केन्द्रको निर्देशक हुनुहुन्छ जहाँ याकूब भर्ना गरिएको छ।
स्टीभन अभिभावक तपाईंले यसलाई दुई पटकमा देख्नुहुनेछ; किनकी लेखकले तपाईंलाई बर्षौं पहिले चरित्रको एक चरण देखाउँदछ र अर्को उपस्थित छ। उहाँसँगै, नजिकबाट सम्बन्धित अन्य पात्रहरू हुन्: करेन, अमांडा र कार्ला।
स्टेला हेडेन। एफबीआई प्रोफाइलर उनीहरू याकूबसँग कुरा गर्न पठाउँछन् र थाहा पाउँदछन् कि उसलाई किन त्यस्तो अपराध गरेको थियो।
हामी चरित्रहरूको बारेमा धेरै कुरा प्रकट गर्न सक्दैनौं किनकि यदि हामीले त्यसो गर्यौं भने हामी तपाईंलाई सुराग दिन्छौं र पुस्तकका महत्त्वपूर्ण भागहरू निकाल्छौं।
के यो किताब पढ्न लायक छ?
हामीले तपाईंलाई के भनेको छ पछि, सामान्य कुरा यो हो कि तपाईं यो पुस्तक हो कि तपाईं पढ्न चाहानुहुन्छ कि एक विचार छ वा यदि, कथानक, कहानी वा बताउने तरिकाको कारणले, यसले तपाईंलाई पर्याप्त आकर्षित गर्दैन। सत्य यो हो कि कथा भन्नुको तरिका एक हो जुन तपाईंलाई पहिला श doubts्काका साथ भर्दछ।
जब तपाइँ पहिलो अध्याय पढ्नुहुन्छ, तपाइँलाई थाहा छैन के भयो।। तिमीलाई थाहा छैन को, किन, के भयो। लेखकले तपाईंलाई केही स्ट्रोक मात्र दिन दिन्छ जुन विवेक हरायो। यदि हामी यसमा थप्छौं कि दोस्रो अध्यायले सेटि and र क्यारेक्टरहरू परिवर्तन गर्दछ, यसले तपाईंलाई अझै अलमल्याउँछ र तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो पढ्न सजिलो किताब होइन।
सबै पृष्ठहरूमा, तपाइँ उपन्यासमा पछि परिभाषित दुई समय स्लटहरू फेला पार्न जाँदै हुनुहुन्छ। एकातिर "वर्तमान" (उपन्यास लेखिएको वर्षलाई ध्यानमा राख्दै वा यसले राख्दछ कि) र अर्को विगतमा (धेरै वर्ष अघि ती पात्रहरूको समयमा)। सुरुमा यो धेरै नै चिन्ताजनक छ, विशेष गरी किनभने यो स्पष्ट पार्दैन कि तपाईं वर्तमानमा हुनुहुन्छ वा विगतमा। जब तपाइँ पहिले नै पात्रहरू जान्नुहुन्छ, त्यो स्पष्टीकरण आवश्यक छैन।
यसमा कुनै श doubt्का छैन सुरुमा कथाले कुनै अर्थ राख्दैन जस्तो देखिन्छ, र एक पटक भन्दा बढि तपाईंलाई यो बोरिंग छ जस्तो लाग्न सक्छ, वा यसलाई जारी गर्न यसमा केही गलत छैन भनेर। तर रहस्य चारैतिर चरित्र गर्दछ कि तपाइँ उसलाई छोड्न सक्नुहुन्न; तपाईलाई के हुन्छ जान्न मन लाग्छ, लेखक कसरी त्यो टाउकोबाट बाहिर निस्किने जाँदैछ जसमा उनले पात्रहरू राखेका छन्। र केहि मलाई मनपर्‍यो कि अन्त भनेको तपाइँले अपेक्षा गरेको कुरा होइन। त्यहाँ धेरै विवरणहरू छन् जुन भाग्नको लागि अन्त हुन्छ, त्यसले तपाईंलाई चकित पार्छ, र त्यो राम्रो कुरा हो। यदि तपाईं उत्सुक पाठक हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईं पुस्तकमा आफ्नो आश्चर्यको खुराक पाउनुहुनेछ।
त्यसो भए, हाम्रो पक्ष र मेरो व्यक्तिगत अंशको लागि किनकि मैले पुस्तक पढेको छु, यो हो, हामी यसलाई सिफारिस गर्छौं। जे होस् तपाईं पहिले हुकिएन, यसलाई एक अवसर दिनुहोस् किनकि त्यहाँ रहेको रहस्यको लागि, यो लायक छ।
होशियार रहनुहोस्: त्यहाँ दोस्रो भाग छ
बिषय छोड्नु अघि हामीले तपाईंलाई थाहा दिनु पर्छ। जुन दिन तपाईले आफ्नो सेन्टी हराउनुभयो त्यो किताब हो जुन स्वतन्त्र रूपमा पढ्न सकिन्छ; यसको वास्तवमा सुरुवात र अन्त हुन्छ। यद्यपि अन्तिम पृष्ठहरूमा लेखक आफैले “केहि” गरे जसले तपाईलाई आफ्नो ओठमा मह लगाउँदछ, र यदि तपाईले यसलाई पढ्न समर्पण गर्नुभयो भने तपाई अook्कुक्क हुनुभयो, त्यो छोड्ने फ्रिंजले तपाईलाई दोस्रो बनाउन चाहान्छ। पुस्तक
यो बारेमा छ दिन प्रेम हराएको थियो र यो पहिले नै किताबहरूको पसलमा छ, त्यसैले यो लामो समय आउन तपाईंले लामो समय पर्खनु पर्दैन। यसमा कथाको दोस्रो भाग भनेको भनिएको छ, उही पात्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, तर केहि थप थप्दै जो पहिलोमा माध्यमिकको रूपमा देखा पर्दछ।
यो त्यस्तो पुस्तक होईन कि तपाईंले अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्दछ, किनकि वास्तवमा यदि तपाईं स्यानिटी हराएको दिनको साथ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई सोध्दैन। तर यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जो रहस्यको पूर्ण रिजोलुसन प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, हामी सिफारिस गर्दछौं।
र तपाईं? के तपाईंले पुस्तक वा पुस्तकहरू पढ्नुभयो? तपाईले के सोच्नु भयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » त्यो विवेक हराएको दिन